सन् २०१८ मा अरबपतिले पाँचसय ११ अर्ब डलर गुमाए - Enepalese.com
सन् २०१८ मा अरबपतिले पाँचसय ११ अर्ब डलर गुमाए
यादवराज जोशी २०७५ पुष १४ गते २३:०८ मा प्रकाशित
सन् २०१८ को अन्त्यमा विश्व पूंजीबजारमा आएको मन्दीले विश्वका अरबपतिले पाँचसय ११ अर्ब अमेरिकी र डलर गुमाएका छन् । ब्लुम्वर्गले शनिबार प्रकासित गरेको वार्षिक पूंजी बजार समिक्षामा विश्वका पाँचसय अरबपतिको कूल पूंजीमा उक्त कमी आएको उल्लेख छ । गत शुक्रबार पुंजीबजारबन्द हुदाँसम्म पाँचसय धनीको कुल पूंजी ४.७ ट्रिलियन रहेको छ ।
सन् २०१९ मा पनि पूंजीको विकास घटदो हुने ब्लुमवर्गले अनुमान गरेको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी नै आउछ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । तर, पूंजीको विकास ऋणात्मक हुनेछ, नदर्न ट्रस्ट वेल्थ म्यानेजमेन्टले जनाएको छ ।
सन् २०१८ को अन्त्यमा विश्वका एमाजनका मालिक जेफ बेजोसले ५३ अर्ब गुमाए । एमाजनको सेयर मूल्यमा आएको कमीले उनको सम्पत्ति वर्षको अन्त्यमा एकसय १५ अर्बमा सिमित भयो । गत सेप्टेम्बरमा बेजोसको सम्पत्ति एकसय ६८ अर्ब पुगेको थियो । यसैगरी फेसबुकका मालिक मार्क जुगेरबर्कले सन् २०१८ मा २३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाएका छन् ।
अमेरिकाका एकसय ७३ अरबपतिले कूल १.९ ट्रिलियन गुमाए । यो रकम उनीहरुको कूल सम्पत्तिको ५.९ प्रतिसत हो । यसैगरी एशियाका एकसय २८ अरबपतिले एकसय ४४ अर्ब गुमाए । एशियामा सम्पत्ति गुमाउनेमा चीनका अरबपति पहिलो स्थानमा छन् । चीनको वाड. जेड.लिड. समुहले ११ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर गुमाएको छ ।
आर्थिक अस्थिरताका बावजुद एशियामा सन् २०१८ मा ३९ नयाँ अरबपति जन्मिए । डिसेम्बर ७ सम्म आईपुग्दा तिनीहरुमध्ये ४० प्रतिसत अरबपतिको सुचीबाट बाहिरिन बाध्य भए । मध्यपूर्वमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक नोक्सानी बेहार्नेमा साउदी राजकुमार अदवालिद छन् । भ्रस्टाचार सम्वन्धि मुद्धामा ८३ दिन थुनामा बसेर निस्कदा उनले तीन अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर गुमाएका थिए । अफ्रिकाका अरबपतिको सम्पत्तिमा पनि ११ प्रतिसतको गिरावट आएको छ ।
मेक्सिकोका अरबपति कार्लोस स्लिमको सम्पत्ति नौ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरले कमी आएको छ । उनको कूल सम्पत्ति अहिले ५४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । थ्रिजी प्रविधीबाट उनले उक्त नोक्सानी सहनु परेको हो ।
रुसी अर्बपतिको लागि भने सन् २०१८ राम्रो रह्यो । रुसी अर्बपतिको कुल सम्पत्ति यो वर्ष दुईसय २५ अर्ब रह्यो । रुसका २५ अर्बपतिले निकै थोरै नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो ।